पुर्खाको जति काम २१ औं शताब्दीमा पनि गर्न सकेनौं भने के अर्थः भक्तपुर मेयर :: शान्ति तामाङ :: Setopati
पुर्खाको जति काम २१ औं शताब्दीमा पनि गर्न सकेनौं भने के अर्थः भक्तपुर मेयर
भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापति। तस्बिरः सेतोपाटी
भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिले एक वर्षअघि सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा आफ्ना चार प्राथमिकता सुनाएका थिए- सम्पदा निर्माणमा तीव्रता, दरबार स्क्वायरसहित पुराना बजारमा ढुंगा छाप्ने, नगर सरसफाइ र सम्पदा क्षेत्रमा सवारी निषेध।
यसबारे उनलाई हामीले सम्झाइराख्नै परेन।
उनी कतिसम्म व्यवस्थित छन् भने, सेतोपाटीसँग कुराकानी गरेको र समाचार छापिएको दिनसम्म आफ्नो डायरीमा टिपेर राखेका रहेछन्।
वर्ष दिनअघिको अन्तर्वार्ता 'फलोअप' निम्ति केही दिनअघि भेट्दा मेयर प्रजापतिले भने, 'मैले त्यतिबेला तपाईंहरूसमक्ष बाचा गरेका सबै काम सुरू गरिसकेको छु। कति त लगभग पूरा हुने अवस्थामा छन्।'
‘दरबार स्क्वायरमा गाडी निषेध गरेका छौं। टौमडी क्षेत्रमा माघ महिनाबाट निषेध गरिँदैछ। दत्तात्रय क्षेत्रमा ढुंगा छाप्ने काम लगभग सकिएको छ। अन्य क्षेत्रमा पनि ढुंगा छाप्दै छौं। नगर सरसफाइको कामले एक वर्षदेखि निरन्तरता पाइरहेको छ,' उनले विस्तार लगाए।
भक्तपुर यस्तो नगरपालिका हो, जहाँ हरेक १५ दिनमा एकपटक सयौं स्थानीय हातमा कुचो लिएर निस्कन्छन्। साथमा हुन्छन्, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी। स्थानीयलाई बरू अनिवार्य छैन। उनीहरू स्वस्फुर्त आउने हुन्। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भने नआई हुन्न। सुरूमा करिब पाँच हजार जना सहभागी हुन्थे। अहिले पनि हजार जना त आएकै हुन्छन्।
सरसफाइको दिन जुन ठाउँमा काम गर्ने हो, त्यहाँको समूह, क्लब, वाचनालय, विद्यालय र खेलकुद समितिहरू परिचालन गरिन्छन्। कुनै दिन पन्ध्र सयभन्दा धेरै सहभागी भए सुरक्षाका लागि सेना र प्रहरी बोलाइन्छ।
'हामी फोटो खिचाउन काम गर्दैनौं। परिणाम देखिने गरी जगमै गएर काम गर्छौं,' उनले भने, 'त्यही भएर हामीलाई जनताको साथ छ।’
सरसफाइमा जस्तै, सम्पदा संरक्षणमा पनि भक्तपुरले जनतालाई नै सहभागी गराएको छ।
कुनै मठ-मन्दिर, पाटीपौवा, पोखरी वा ढुंगेधाराजस्ता सम्पदा बनाउनुपरे सबभन्दा पहिला नगरपालिकाले जनतालाई आह्वान गर्छ। उनीहरू सँगसँगै विज्ञको राय लिन्छ। र, काम अघि बढाउँछ।
‘सरकारले कसरी गर्छ भनेर हेर्नुभन्दा हाम्रा पुर्खाले कसरी बनाए, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो। हामी एक्काइसौं शताब्दीमा पनि उतिबेलाभन्दा राम्रो गर्न सकेनौं भने के अर्थ? त्यतिखेर न अहिलेजस्तो विदेशी सहयोग थियो, न सरकारले काम गर भनेर पैसा दिने चलन,’ मेयर प्रजापतिले भने।
‘त्यस्तो बेला पनि सयौं वर्ष नभत्किने यति मनमोहक, कलात्मक सम्पदा बनाइएका छन्। कसरी सम्भव भयो होला? न इन्जिनियरिङ कलेज थियो। न आर्किटेक्टहरू थिए। हाम्रा यी सबै सम्पदा स्थानीय सीप र क्षमताका उपज हुन्। त्यही भएर हामी स्थानीयमाझ जान्छौं। आफ्ना कुरा राख्छौं र उहाँहरूकै रायअनुसार काम गर्छौं।’
भक्तपुर नगरपालिकाले गत महिना मात्र दरबार क्षेत्रको सिद्धिलक्ष्मी मन्दिर पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्यो। पुरातत्व विभाग र नगरपालिकाको सहकार्यमा उक्त पुनर्निर्माण भएको थियो। तलातुँथी पाटी पनि गत महिना नै पुनर्निर्माण सकिएको छ। यो उपभोक्ता समितिले बनाएर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको हो।
काठमाडौं र ललितपुर महानगरमा जस्तो यहाँ सम्पदा पुनर्निर्माणमा विदेशी लगानी वा ठेकेदार प्रयोग गरिँदैन।
‘हामीकहाँ सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न जनताले श्रमदान गर्छन्। चन्दा पनि उठाउँछौं। नगरपालिकाले लगानी गर्छ,’ उनले भने, ‘इस्टिमेटभन्दा कम पैसामा उच्चस्तरीय निर्माण गर्छौं। त्यसले पनि फरक देखिएको हुनुपर्छ।’
भक्तपुरमा भुइँचालोले साना-ठूला गरी १ सय ३० सम्पदामा क्षति पुर्याएको थियो। तीमध्ये ३७ वटा पुनर्निर्माण भइसकेका छन्। बाँकी रहेका धेरै निर्माणाधीन छन्। पुरातत्व विभागले पनि केही पुनर्निर्माण गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। पाटी, पौवा, ढुंगेधारा, पोखरी उपभोक्ता समितिमार्फत् पुनर्निर्माण भइरहेका छन्।
‘मेरो कार्यकालमा संग्रहालय लगायत एक-दुईवटा ठूला सम्पदा बाँकी रहलान्, बाँकी सबै पुनर्निर्माण सकिन्छ,’ प्रजापतिले भने।
भुइँचालोपछि भक्तपुरका सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न जर्मन सरकारले १ अर्ब २० करोड रूपैयाँ बराबर सहयोग गर्ने भनेको थियो। प्रजापतिले आफू निर्वाचित भएर आएपछि उक्त सहयोग लिन अस्वीकार गरिदिए। जर्मनी प्राविधिक टोली बसेर उनीहरूकै निर्देशनमा काम गर्नुपर्ने, उनीहरूकै सिफारिसका सामान किन्नुपर्ने, कंक्रिट प्रयोग गर्नुपर्ने लगायत सर्त उनले मानेनन्।
नगरपालिकाले सर्त सच्याउन जर्मन राजदूतसँग तीनपटक छलफल गर्यो। उनीहरू टसमस भएनन्। नगरपालिकाले पनि सहयोग नलिने निर्णय गर्यो।
‘उहाँहरूले भनेजस्तो सिमेन्ट र छड हालेर हामी आफ्नो सम्पदा मास्न सक्दैनौं। त्यो हाम्रो ऐन-कानुनसँग बाझिने कुरा हो,' उनले भने, 'हामीलाई हाम्रो सम्पदा उभ्याउन विदेशी सहयोगको भर चाहिएको छैन।'
यति मात्र होइन, गलत रूपमा पुनर्निर्माण गरेको भन्दै पुरातत्व विभागको काममा समेत नगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेको थियो। सम्पदा क्षेत्रमा कमसल ढुंगा प्रयोग गरियो भन्दै ठेकेदारलाई दोहोर्याएर काम गर्न लगाएको थियो। तलेजु मन्दिरभित्र सिमेन्ट प्रयोग गरिएकोमा पनि नगरपालिकाले विरोध गर्यो।
‘ऐनविपरित हामी कसरी काम गर्न सक्छौं? हामीले नै नियम-कानुन भत्कायौं भने कसले मान्छ?’ उनले भने, ‘अहिले पनि सम्पदा पुनर्निर्माणमा सघाउन विभिन्न संस्थाहरू १०/२० करोड रूपैयाँ लिएर आइरहेका छन्। हामीले भने 'सिधै नगरपालिकाको खातामा निसर्त पैसा आउँछ भने ठीक छ, नभए दु:ख नगर्नुस्' भन्ने गरेका छौं।'
'सबै कुरामा विदेशीको भर पर्यौं भने हाम्रो के काम? हाम्रा इन्जिनियरको के काम? हाम्रो सरकारको के काम?’ उनले प्रश्न गरे।
त्यसै पनि भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नै इन्जिनियरिङ कलेजबाट वर्षमा ४ सय ३२ इन्जिनियर उत्पादन गर्दै आएको छ।
नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिरहेका कामको पनि उनले जानकारी दिए। भक्तपुर नगरपालिकाले यो वर्ष २५ शैयाको अस्पताल बनाउने स्वीकृति पाएको छ। यसको क्षमता बढाउँदै तीन वर्षभित्र सय शैया पुर्याउने नगरपालिकाको लक्ष्य छ।
उनका अनुसार नगरभित्रका तीन स्वास्थ्य चौकीमा अहिल्यै ३० जना डाक्टर छन्। १६ जना विशेषज्ञ डाक्टर। नगरका घर-घरमा नर्सिङ सेवा उपलब्ध छ। प्रत्येक वडामा एक जना नर्स कार्यरत छन्। ती नर्सले घर-घरमा सेवा दिइरहेका छन्। स्वास्थ्य चौकीमा चौबीसै घन्टा आकस्मिक सेवा उपलब्ध छ। नगरपालिकाले नै दुईवटा औषधि पसल सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यहाँबाट सहुलियतमा औषधि किन्ने व्यवस्था छ।
नगरपालिकाले सरकारी र गैरसरकारी स्कुलबीच भेद हटाउने योजना पनि अघि बढाएको छ। यसका लागि शिशु कक्षा पढाउनेलाई तालिम दिने, विद्यालय अनुगमन गर्ने, शिक्षक परिवर्तन गर्ने लगायत काम गर्दैछ।
‘विदेशमा सरकारी स्कुल पाएसम्म निजीमा पढाइँदैन। हामीकहाँ भने निजीमा पढ्न र पढाउन पाए ठूलै उपलब्धि हासिल गरेजस्तो ठानिन्छ। हामीले सरकारी स्कुलको स्तर उठाइदियौं भने निजीको महत्व स्वत: घट्दै जान्छ। सरकारी स्कुल राम्रो भयो भने मेरो बच्चा सरकारीमा पढ्छ भनेर गर्व गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै मातृभाषा शिक्षामा पनि जोड दिएको छ। नेपाल भाषा, लिपि र संस्कृति पढाउन सुरू गरेको छ। तीन वर्षभित्र कक्षा १ देखि ८ सम्म सबै विद्यालयमा लागू गर्ने नीति लिएको छ।
‘गैरनेवार साथीहरू भन्नुहुन्छ, यो नेवार भाषाको के काम? त्यसो भए चाइनिज भाषाको के काम? अरू देशको भाषा पढ्ने, आफ्नो भाषा नसिक्ने? त्यसैले हामीले नगरपालिकाभित्रका ९२ वटा स्कुलको पाठ्यक्रममा नेपाल भाषा अनिवार्य गरेका छौं,’ मेयर प्रजापतिले भने, ‘शिक्षकहरूलाई केही सन्दर्भ सामग्री दिएका छौं। त्यसैअनुसार पढाउनू भनेका छौं। विद्यार्थीलाई पढ्न लगाएर आफू बस्ने होइन, आफैं पुस्तकालयमा गएर पुस्तक हेर्ने र इन्टरनेटमा सामग्री खोज्ने भनेका छौं।’
स्थानीय गतिविधिलाई पाठ्यक्रममा सामेल गराउन पनि पहल गरिरहेको उनले बताए।
‘स्थानीय विषय जानकारी नहुने, अनि अरू विषय मात्र पढेर हुन्छ? अमेरिका गए पनि, अस्ट्रेलिया गए पनि भक्तपुर भनेको के हो भनेर कसैले सोध्यो भने दुई घन्टा धाराप्रवाह बोल्न सकियोस् भनेर जरासम्मै काम गर्दैछौं। भक्तपुर निर्माणमा योगदान दिने व्यक्तित्वहरूलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्दैछौं,’ उनले भने।
अबको १०/१५ वर्षपछि भक्तपुरमा पढ्नेले कम्तीमा चारवटा भाषा बोल्न जान्ने उनले दाबी गरे। नेपाल भाषा, नेपाली, अंग्रेजी र अरू कुनै एउटा भाषा। अंग्रेजीबाहेक चिनियाँ, फ्रेन्च वा अन्य कुनै एउटा भाषा नगरपालिकाले पढाउने उनले बताए।
‘एउटा भाषाको लागि शब्द निर्माण गर्न सयौं, हजारौं वर्ष खर्च भयो होला। त्यस्तो भाषा हामी लोप गर्दैछौं। त्यसलाई बचाउने भनेको हामीले नै हो। त्यही भएर स्थानीय भाषालाई माध्यमिक तहसम्म अिनवार्य गर्ने कोशिस गरिरहेका छौं। भाषालाई जीवन्तता दिन पनि काम गरिरहेका छौं,' उनले भने।
भक्तपुरलाई 'नमूना नगर' बनाउने अभियानमा लागेका मेयर प्रजापति केन्द्र सरकारको व्यवहार भने चित्त नबुझेको बताउँछन्।
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्राविधिक जनशक्ति राख्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिएको छ। कृषि विशेषज्ञ, ओभरसियर, इन्जिनियर, नर्सजस्ता प्राविधिक विशेषज्ञ हामी आफैं राख्न पाउँछौं। केन्द्र सरकारले भने अहिले नराख्नू भन्ने आदेश दिएको छ। यो त हाम्रो अधिकार खोस्ने काम भयो,’ उनले भने, ‘संविधानले संघीयताको कुरा गरेको छ। कानुनले संघीयताको कुरा गरेको छ। हाम्रा मन्त्रीज्यूहरू र केन्द्रीय स्तरमा बस्ने प्रशासकहरूमा भने त्यो बुझाइ नै छैन। संविधान नबुझेको भनौं भने आफैं बनाउने, अिन कार्यान्वयन बेला तोडमोड गर्ने?’
कर्मचारी भर्ना र स्थायी गर्ने विषयमा केन्द्रले हस्तक्षेप गरे स्वायत्तताको कुनै अर्थ नरहने उनले बताए।
केन्द्र सरकारको रवैयाबाट निराश प्रजापतिलाई जनताले देखाएको उत्साहले भने हौस्याउँछ। ‘हामी जे काम गर्छौं, स्थानीय जनतालाई ध्यानमा राखेर गर्छौं। अरूले पनि सिकून् भनेर गर्छौं,' मेयर प्रजापतिले भने, 'काम कस्तो भयो भनेर जनताको राय बुझ्न बेलाबेला घरदैलोमा जाने गरेको छु। सबैले राम्रै भनिरहेका छन्। शतप्रतिशत त कसरी सन्तुष्ट हुन्छन् र?’
'हेर्दै जानुस्, मेरो यही कार्यकालमा भक्तपुर नमूना नगर बन्नेछ,' उनले भने।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस १७, २०७५, ०४:३९:००